Chelsea Oo Raadinaysa Laba Cayaartoy Oo Dafaaca Uga Cayaarta AC Milan | Shabakada Qalinkacayaaraha.com
Chelsea Oo Raadinaysa Laba Cayaartoy Oo Dafaaca Uga Cayaarta AC Milan
(11-9-2018) Macalinka Cusub ee kooxda kubadda cagta Chelsea, Maurizio Sarri ayaa doonaya in kooxdiisu ay heshiis la gasho laba ciyaartoy oo difaaca ah oo ka tirsan naadiga AC Milan ee waddanka Talyaaniga.
Sarri ayaa saluugsan qaab ciyaareedka difaacyahannada wakhtigan ee Chelsea, waxaanay dantu ku kelliftay inuu dib garoomada ugu soo celiyo David Luiz oo uu kooxda hore uga caydhiyey Antonio Conte, kaas oo aan soo bandhigin ciyaaro taageereyaashu jeclaystaan.
Sida uu qoray wargeyska Daily Mail, tababare Maurizio Sarri ayaa ka codsaday masuuliyiinta kooxda inay ka shaqeeyaan sidii loo keeni lahaa Chelsea difaaca Alessio Romagnoli oo lagu tilmaamo inuu yahay Nesta cusub oo dunida mar labaad yimid, isla markaana u ciyaara AC Milan.
Romagnoli oo ay da’diisu tahay 23 sano jir, ayaa dhowaan ay Milan shaacisay inuu yahay Nesta cusub marka la eego qaabka uu kubbada ciyaaro, difaacista iyo hoggaaminta garoonka gudihiisa, sidaas daraadeedna uu noqonayo kabtanka rasmiga ah ee kooxda Talyaaniga.
Wargeysku waxa kale oo uu warkiisa ku sheegay in Sarri uu dalbaday difaacyahanka Mattia Caldara oo dhowaan AC Milan kaga soo beddelatay Juventus halyeygoodii Bonucci.
Difaacan 24 jirka ah ayaa uu Sarri qorshaha koowaad ka dhiganayaa, waxaana uu codsaday in laga shaqeeyo sidii uu bisha January ku iman lahaa Stamford Bridge.